Ny sary an-tsary finday tsara indrindra miaraka amin'ny efijery 18: 9 Androidsis
Ny sary an-tsary finday tsara indrindra miaraka amin'ny efijery 18: 9
Ny iray amin'ireo fironana hitantsika eny an-tsena hatramin'ny taona lasa dia telefaona misy aseho 18: 9. Ireo dia telefaona misy efijery tsy misy frame. Ka io fifangaroana io dia nanjary fahita teo amin'ny tsena. Na dia tsy nisy olana aza ny fahatongavany. Satria ilaina ny mampifanaraka ireo rindranasa amin'izany.
Ary koa ny sary an-tsary dia tsy maintsy nifanaraka tamin'ity endrika efijery vaovao ity. Noho io antony io dia mahita ny rindrambaiko natao manokana ho an'ity karazana efijery ity izahay. Avelanay safidy vitsivitsy ianao.
Andian-tsarimihetsika namboarina nifanaraka tamin'ny tahan'ny 18: 9. Ka raha manana telefaona manana an'ity efijery ity ianao dia mety ho safidy tsara hampiasa azy ireo. Ho fanampin'izay, ireo fiaviana rehetra nofidianay ireo dia miavaka amin'ny kalitaon'ny sary tsara.
Ka izy ireo dia hijery ny tsara indrindra amin'ny fitaovanao. Hatramin'izay nanjary mazava dia ity endrika ity dia mihoatra ny fironana fotsiny. Efa tonga hijanona eny an-tsena izy io. Betsaka ny telefaona mampiasa an'io ary tsy atokana ho an'ny avo intsony izy io. Misy mobiles mora vidy izay mampiasa an'io endrika io ihany koa.
Aza adino ny faritra misy anay sary an-tsary finday
1 tsara tarehy
2 Maizina hamonjy bateria
Raha manana telefaona manana tahan'ny 18: 9 ianao, azo antoka fa mila sary mihetsika tsara tarehy ianao. Ny tsirairay dia mety manana fomba fijery hafa momba ny hatsarana, fa izy ireo dia fiaviany mahafinaritra jerena, ampahany amin'ny fisaorana azy tsara na ny fampiasana loko miloko. Noho izany, etsy ambany izahay dia mamela anao manana sary an-tsary mahafinaritra vitsivitsy hanovana ny fisehoan'ny findainao Android. Safidio izay tianao indrindra amin'ity tranga ity:
Maizina hamonjy bateria
Raha manana telefaona misy tontonana OLED na AMOLED ianao, ny fampiasana rindrina maizina dia zavatra mety hahaliana anao. Ireo karazana fiaviana ireo dia mamela ny piksel hiasa tsy miankina, koa raha ampiasaina ny maizina, dia ho vitsy ny pixel miasa amin'ny efijery finday. Noho izany, mamonjy angovo ianao amin'ny fampiasana sary an-tsary. Tranga izay efa noresahintsika taloha, ary izany dia fanampiana tsara hitadidy ao an-tsaina.
Soa ihany, maro ny sary maizina azontsika atao ny mandray an-tsaina amin'ity lafiny ity, fa avelany izahay hanararaotra ny tontonana OLED na AMOLED an'ny fitaovana hitehirizana angovo. Eto ambany ianao dia afaka mahita vola vitsivitsy hodinihina:
Raha hampiasa sary an-tariby amin'ny telefaona isika, dia tsara indrindra amin'ny famahana vahaolana mety indrindra. Ka, tokony hitady fiaviana misy amin'ny HD isika, ho an'ny kalitao sy traikefa tsara kokoa amin'ny telefaona rehetra. Ny fisafidianana ireo sary HD dia tsara fa malalaka, miaraka amin'ny karazany maro. Mora ny mahita iray izay mifanaraka amin'ny efijery 18: 9 amin'ny telefaona Android. Mila misafidy fotsiny ianao amin'ireo safidy azo atao.
Ho an'ny vokatra tsara kokoa, izay azo antoka fa tena hahaliana ny maso, safidy 3D foana no safidy tsara handray kajy amin'ny Android. Mahita vola ampy amin'ity karazana ity izahay, izay ahafahantsika manova ny telefaona mamorona vokatra mahaliana. Mivoaka amin'ny mahazatra izy ireo eo amin'ny sehatry ny sary an-tsary, ary ianao koa mahazo zavatra izay manamboatra ny tsironao ihany koa.
Noho izany, tena azo inoana fa maro aminareo efa manana telefaona misy efijery 18: 9. Raha iray amin'ireo tsara vintana ianao, ireto sary miloko mareva-doko mety hahaliana anao izy ireo. Aza misalasala misintona azy ireo, satria izy ireo dia afaka mifandimby tsara amin'ireo atolotry ny mpanamboatra anao.
Raha misy mahaliana anao ny iray amin'ireo vola ireo, mila tsindrio fotsiny ianao. Hisokatra amin'ny takelaka vaovao ny sary ary afaka mitahiry mivantana ny zava-misy amin'ny findainao ianao. Manantena izahay fa ity fifantenana ny sary mihetsika finday miaraka amin'ny efijery 18: 9 mahaliana anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ny sary an-tsary finday tsara indrindra miaraka amin'ny efijery 18: 9
Ny boaty Galaxy S9 dia mivoaka miaraka amin'ny famaritana farany sy ny tsy ampoizina maro
Goole dia te handefa fitaovana miaraka amin'ireo mpandahateny tafatsangana ao amin'ny efijery